Wonke umnikazi wemoto ngokushesha uzothola ukuthi "ihhashi" layo "lidinga ibhethri elisha." Futhi lapha kukhona inkinga yokuzikhethela. Phela, umsebenzi wemoto ngokugcwele uxhomeke kudivayisi ekhethiwe kahle.
Ukulinganisa kwamabhethri emoto kuklanyelwe ukusiza kule nkinga enzima. Ibhethri eliphakeme liqeda ukuvela "kokungaboni kahle" ngokuqaliswa kwedivaysi yamandla, ngakho-ke wonke umshayeli wemoto ufuna ifa lakhe libe nekhophi engcono kakhulu ngaphansi kwe-"hood" ye-hood, engeke ihluleke ezimweni ezinzima futhi izohlala iminyaka eminingi.
Amabhethri emoto: ukulinganisa
Siyakucabangela uhlu lwezitoreji zokugcina ezihamba phambili . Sithemba ukuthi lolu lwazi luzokusiza wenze ukhetho olufanele.
I-Varta - amabhethri wokukhiqiza kweJalimane, ikhwalithi yayo eyaziwa emhlabeni wonke. Lawa madivayisi anesimo esiholela phambili. Abaqashi balesi sibhamu banesigamu esikhulu sezimoto ezintsha zaseYurophu. Izakhi ezinjalo zikhiqizwa inkampani yaseNyakatho Melika ngaphansi kwegama elithi Johnson Controls. Igumbi lamandla okucatshangelwayo libonisa ibhalansi enhle yokubuchwepheshe nobuchwepheshe, okuqinisekisa ukuhambisana ngokugcwele namazinga athile omhlaba wonke. Lawa madivayisi ahlonishwe umphakathi waseRussia ingxenye enkulu ngenxa yenqubomgomo yamanani eyamukelekile.
I-Varta ibhethri engokwezihlobo zokusebenza ezingalindelekile. Zinikezwa ngamabhethri emoto ngekhono lama-40 - 110 Ah. Ikhiqizwe emaqenjini amane omkhiqizo: Okumnyama okumnyama, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okunamandla e-Silver, i-Start-Stop Plus AGM. Ngesikhathi esifanayo isisindo sebhethri sisuka ku-10.57 kuya ku-29.20 kg, futhi izindleko ziyahluka kusuka kuma-dollar angu-44 kuya ku-249.
Indawo yesibili ingeyenkampani yaseJalimane "Bosch". Le nkampani ikhona emakethe iminyaka engaphezu kwengu-12 futhi yaziwa emhlabeni jikelele ngemikhiqizo yayo ephezulu. Amabhethri we-Bosch anezici ezinhle kakhulu. Iningi lezici zohlu lombane lomkhiqizo obhekene nalo lwenziwa eJalimane, kodwa imakethe yaseCzech nayo imelwe emakethe yaseRussia. Lezi zinkampani ziyingxenye yokukhathazeka okufanayo futhi zinikeza imishini enhle kakhulu ezimotweni. I-AKB ibonisa ikhono lokushaja okulula futhi okusheshayo, elibhekwa ngamandla okuqala okuqala.
Amabhethri e-Original Bosch anenzuzo elandelayo:
Ukusebenza kwekhwalithi ephezulu;
Ukuphila kwesikhathi eside kungakhathaliseki izimo zokusebenza;
Kukhona izinga lokuphepha ngamafutha aqhwaqile kakhulu efomini yamandla;
Ukusebenza okuhle kakhulu emazingeni okushisa aphansi;
Ukukhuthazela ezimweni ezinzima zezulu;
Ukushaja okuphumelelayo nokushesha lapho ulandela imithetho yokusebenza;
Ukuvumelana ngokuphelele nezici zobuchwepheshe kanye nemingcele yezinhlelo ezihamba ngezinyawo zezimoto ezihlukahlukene.
Amabhethri alo mkhiqizo abhekwa amandla amakhulu kanye nokwanda okuqala kokuqala kwenkampani yokuqala. Futhi kuzohlala okungenani iminyaka engu-4, iminyaka emibili ehambisana nesevisi yewaranti.
Futhi okubaluleke kakhulu, indawo yesibili kungokwamabhethri akwa-Bosch, hhayi ngenxa yokuthi ayimbi kakhulu kunomshini wangaphambili ngokwemigomo yezobuchwepheshe, kodwa kuphela ngoba intengo yabo isesimweni esiphakeme. Lokhu kwenza ukuba kufinyeleleke kalula kunemishini efanayo yezimoto ze-TM "Warta".
Thayipha: ngokuphelele okungenasondlo.
Amandla: 40 - 110 Ah.
Isisindo: 10-12 kg.
Intengo: ama-ruble angu-4200-13000.
Ukulinganisa kwama-accumulator amahle akuzange akhohlwe ngabantu abakwaRussia abakhiqizi bamandla. Kuphathelene nomkhiqizo othi "Akteh." Lesi yisisombululo esihle kulabo abafisa ukusekela umkhiqizi wasekhaya. I-AKB "Akteh" - amabhethri wekhwalithi enhle kakhulu, eqinisekisa ukuthi zonke izindawo ezihle kakhulu futhi zibuyele ngesikhathi sokusebenza. Ukukhiqizwa kusekelwe ekusetshenzisweni kobuchwepheshe babaholi bezinga eliphezulu kuleli qembu lomkhiqizo.
Izinzuzo zama-aktech amabhethri:
Ukukhishwa kwamandla amakhulu;
Ukushaja ngokugcwele ngaphandle kwemiphumela eyingozi yebhethri ngokwalo;
Izici zokusebenza ezinhle (ukukhuthazela, ukungazitholi, njll);
Ukuhleleka kokugcinwa ngokwakho;
Izindleko eziphansi (ngokuqhathaniswa nemikhiqizo yangaphandle);
Ukukwazi ukuvuselela ngosizo kwanoma iyiphi idivayisi.
I-voltage: 12 V.
Umthamo onamandla webhethri: 55, 60, 66, 77, 90, 140, 190 Ah.
Isisindo: isilinganiso esingu 15.7 kg.
Intengo: ama-ruble angu-2800-6000.
Ibhethri ejwayelekile "Akteh" enkantolo ephansi (ngezimoto Hyundai ne Ford).
I-Asia - ibhetri yemishini yemvelaphi yase-Asia.
I-TT - uhlobo jikelele.
I-Duo Extra - amabhethri, athunyelwa emazweni aseYurophu ngezimoto zesigaba D, E, F.
"Orion" - eyenzelwe imoto evamile yemvelaphi yasekhaya, ihlanganisa izinga eliphakeme lokuthembeka nentengo ephansi.
Lena ibhethri engcono kakhulu yaseRussia. Isilinganiso sanikeza ubhedu ku-Akteh brand, futhi uma sicabangela uhlu lwabakhiqizi bebhethri baseRussia, indawo yokuqala iqinisekisiwe kumkhiqizo wasekhaya.
Ivala abaholi abahlanu abaphezulu be-TM Medalist. Umenzi wale mabhethri ungumvelaphi waseMelika-Korea. Naphezu kwalokhu, uyaziwa kahle ensimini yaseRussia. Amandla okuthengiswa kwamabhethri at ezingeni eliphansi. Futhi lokhu kuyaqondakala, ngoba inkampani ikhiqiza ibhethri ngokusetshenziswa kwemishini elula. Amanani agqamile futhi awahambisani nezici ezifanisayo, futhi isikhathi sewaranti asincane. Yingakho lawa mabhethri omzimba angenayo isidingo esikhulu. Isilinganiso sasibeke endaweni yesihlanu kuphela ngenxa yokuthandwa okukhulayo, nekhwalithi, okumele ibe ngezinga eliphakeme esikhathini esizayo.
Amabhethri alo mkhiqizo amelelwa ngamabhethri ezimoto anekhono lama-40 - 140 Ah. Akuhlosiwe kuphela ngezimoto zaseYurophu, zaseJapane naseMelika, kodwa futhi nezokuthutha kwamanzi. Ngesikhathi esifanayo, izici zesisindo zedivayisi ziphakathi kuka-10.2-27.1 kg, futhi izindleko ziyahluka kusuka ku-$ 63 kuya ku-$ 197. Ikhomba uhlobo olungalindelekile lwebhethri.
Uthi okokuqala uzwa ngalolu hlobo? Lokhu akumangalisi! Kungekudala, okungaphezulu konyaka odlule, umenzi wasusa amabhethri omdabu. Abayilandelayo kwakuyi-AKB ROYAL.
I-TM "Titan" ingomunye ummeli wabakhiqizi bemishini yezimoto zaseRussia. Ukuhlanganiswa kwezakhiwo ezinhle, ikhwalithi enhle kakhulu, ukusebenza, ukutholakala kokubuka kwezezimali - "i-Titan" (amabhethri e-auto). Ukulinganisa kwababeka endaweni yesithupha ngenxa yezinzuzo ezilandelayo:
Ukungabi nokuzikhandla kwezimo zokusebenza;
Ukutholakala kwabadayisi nabathengisi ezweni lonke.
"I-Titan" ibonisa izinga eliphakeme lezakhi zamandla kanye nenqubomgomo efanele yentengo.
Ukufakwa kwebhethri kuhlanganisa: I-Diesel, Japan Car, Standard.
Thayipha: akulindelwe (hybrid).
Amakhono: 45, 55, 60, 70, 74, 75, 88 Ah.
Isisindo: isilinganiso esingu-15 kg.
Intengo: ama-ruble ayi-870-1600.
Ibhethri ye-Turkish Multu ibonisa ingxenye yesabelomali futhi ingenye yezinhlobo ezithandwayo. Okungcono kakhulu lawa mabhethri angeke abizwe, kodwa, unikezwe umthamo omuhle ekukhuleni kwesidingo phakathi kwabathengi kanye nezinzuzo zabo ezifakiwe, azikwazi ukufakwa ohlwini lokulinganisa.
Ukutholakala kusuka ekubukeni kwezezimali, nakwe-assortment;
Ukungabikho kwempendulo embi yabathengi;
Idumela elihle lomkhiqizi;
Izinga eliphezulu lokukhiqiza;
Ukubambisana nabaholi beklasi emhlabeni;
Izici eziphathekayo zobuchwepheshe.
Kubalulekile ukuphawula ukuthi amabhethri alo mkhiqizo akhulise ukuqhutshwa kwamanje (ngokulinganiselwe ngamaphesenti angama-30 ngaphezulu kunezinye amabhethri). Amacwecwe awabonakaliswa ukubola, ukuphuma komzimba kuphansi, ukusetshenziswa kokusetshenziswa kwamanzi kuyinto encane, ukusebenza kuzinzile ngisho nangaphansi kwezimo zokusebenza eziyinkimbinkimbi, kunamakhemikhali aphikisayo nokuphikisa.
Amadivaysi alo mkhiqizo amelelwa ibhethri enekhono lama-50 - 225 Ah. Ngesikhathi esifanayo, izici zesisindo sedivaysi ziphakathi kuka 14.5-58 kg, futhi izindleko ziyahlukahluka kusuka ku-1200 kuya ku-6500 ruble. Kungokwalabhethri wenhlobo yesondlo.
Amabhethri wezimoto "Isilwane" sibonisa imikhiqizo yokukhiqizwa kweRussia. Ngesikhathi esifanayo, intengo yabo kanye nekhwalithi zisezingeni eligculisayo, hhayi phansi kunezinye zezinkampani zangaphandle. Izici zebhethri zithuthukiswa ngokungeza izinto ezikhethekile kumbuthano osebenzayo we-electrodes. Izakhiwo zokugaya zamanje nazo zithuthukiswa ngenxa yokuklama kwayo okuyingqayizivele.
Umkhiqizi wenza ukulawulwa kwekhwalithi ejulile kanye nezihloko zebhethri ezivivinyweni eziyinkimbinkimbi. Futhi emva kokuphela kokuphumelela kwala mabhethri awela emashalofini ezitolo nezitolo ezinkulu.
Thayipha: ukungenasondlo (i-silicon).
Amandla: 55-90 Ah.
Umkhawulo wokushisa ovumelekile: -50 kuya ku-100 ° C.
Intengo: ngaphakathi kwama-ruble angu-4000-5000.
Ama-accumulator a-Auto A-mega abamele u-Ukraine emakethe yomhlaba. Izakhi zamandla zalolu hlobo zihlangabezana nazo zonke izindinganiso. Phakathi kwezinzuzo akukwazi ukuphawula ezishibhile uma kuqhathaniswa nabanye abakhiqizi abaphezulu. Phakathi kwamaminithi - isisindo, ngoba izinkomba ezinkulu zalezi zinhlanganiso zikhulu kakhulu. I-mega ihlobene namabhethri okungewona okondliwa, okubhekene nemingcele yezinyathelo ezikhulayo, ukusebenza okuhle kakhulu ngaphansi kwezimo ezinzima ze-frost (injini izoqala ngisho nasesithwathwa sama-50-degree).
Ukuphepha kokusebenza kunikezwa isembozo esiphezulu, esiqeda ukuthi kungenzeka ukukhishwa okuzimele, ukuqhuma kwe-spark, ukukhululwa kwezinhlayiyana ezincane ze-asidi. Amabhethri womkhiqizo obabuzwayo nawo abonakala ngokuzinza kwe-vibration. Lokhu kwafezwa ngenxa yesakhiwo esisha esisha. Amaphakheji ahlotshisiwe, okuvimbela i-electrolyte ukuba ingaphunyuki lapho isimo sebhethri sishintsha.
Ukuhlela: A-MEGA ULTRA +, A-MEGA PREMIUM, A-MEGA ASIA, A-MEGA EPHAKILE.
Isibonisi somthamo singafinyelela ku-225 Ah, kanti isibonakaliso esincane singama-44 Ah.
Isisindo: 13,5-71 kg. Le parameter iqondana ngqo nomthamo.
Ukulinganisa kwethu kwamabhethri emoto amahle kakhulu kungabizwa ngokuthi yizizwe ngezizwe, ngoba kufaka phakathi abakhiqizi baseRashiya, base-Ukraine, abangaphandle kanye nezimpawu zabo zokuthengisa.
Ibhokisi lamandla webhethri laklanyelwe izimoto zomhlobo wabagibeli. Le divayisi ibhekene nokukhula okwenyuka kwamanje, okuqinisekisa ukuthi injini iqala ngisho nangenkathi yamaqhwa, lapho izinga lokushisa kwi-thermometer liwela ngaphansi kwe-zero. Amandla okuzikhulula ayancishiswa ngenxa ye-plate calcination system esetshenziswayo. Ukupheka kwe-electrolyte nakho sekuqedwe ngokuphelele ngenxa yesistimu esebenzayo ye-labyrinth engxenyeni engenhla ye-monoblock.
Amandla: 50, 60, 74, 100, 190 Ah.
Ukuqala kwamanje: 450, 540, 720, 1250 A.
Intengo yi-rubber 1200-4500.
Izakhi ezinjalo zidalwa izimo zokusebenza eziyinkimbinkimbi kakhulu. Lo mkhiqizo uvala ukulinganiswa kwebhethri.
Ibhethri yemoto yanoma yiluphi uhlobo kunzima ukucabanga ngaphandle kwejaja (ishaja), okuyinto idivaysi ekhethekile eyanciphisa amandla amanani wenethiwekhi kagesi kusuka kuma-volts angu-220 kuya kumingcele edingekayo. Uma ukhetha inkumbulo, kufanele uqondiswe uhlobo lwebhethri, amandla alo kagesi (kulinganiswa ku-Ah).
Yini okufanele ngiyibukele?
Imikhiqizo engenhla yamabhethri kufana nokuthembeka nokuqina. Kodwa, njengoba wazi, qedela ukukhipha okujulile kumonakalo ebhetri. Lokhu kunjalo ngempela. Abakhiqizi baseJalimane bakucabangele lokhu. Bafaka amabhethri "i-Wartha" no- "Bosch" ekuhlolweni okukhethekile futhi baqhubeka nokuthuthukiswa kwabo baze bathole imiphumela efunayo. Kuze kube manje, imikhiqizo yemikhiqizo embuzweni iyaqhubeka isebenza futhi ijabule amakhasimende awo, ibonisa ukusebenza okuphumelelayo nangokwethenjelwa ngisho nangemva kokukhishwa okuphelele.
Noma kunjalo, khumbula ukuthi kungakhathaliseki ukuthi yikuphi ukulinganisa kwamabhethri emoto ongeke ufike emehlweni akho, okokuqala uma ukhetha ibhethri kufanele uqondiswe izincomo zomkhiqizi wemoto yakho. Ukuzuza okuphumelelayo!
Fuel isihlungi bafudumale. Indlela Ukushisa lemifanekiso fuel
I "umgwaqo omkhulu": isiqondiso endaweni isenzo
Indlela obumbene a izinaliti Sock isithende? kungcono nje
Indlela ukuthatha imali "Tele2": Crib Wabasaqalayo
Tales nomthelela ukuthuthukisa umcabango wengane